Nagarik News - डाक्टरसँग जिज्ञासा : तालु किन खुइलिन्छ?
Tuesday 18 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	स्वास्थ्य	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / स्वास्थ्य / डाक्टरसँग जिज्ञासा : तालु किन खुइलिन्छ?
डाक्टरसँग जिज्ञासा : तालु किन खुइलिन्छ?	07 May 2013 | 11:03am मङ्गलबार २४ बैशाख, २०७०
यस पटक वीर अस्पतालका छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा.अनुपमा कार्कीबाट पाठकहरुको प्रश्नको जवाफ। म १५ वर्षे किशोरी हुँ। केही वर्षअघिसम्म मेरो कपाल बाक्लो र लामो थियो। तर, अनौठो तरीकाले कपाल झरिरहेको छ। टाउको अगाडि उखलेजस्तै पार्टपार्टमा कपाल झरेको छ। नयाँ पलाए पनि झरिहाल्छ। जाँच गर्दा केही समस्या देखिन्न। १२ वर्षको हुँदा पहिलोपटक रजस्वला भएको थियो। दुई वर्षदेखि रोकिएको छ, यही कारण त यस्तो भएको हैन?रेखाकपन, काठमाण्डौकपाल झर्ने कारण धेरै हुन्छन्। कीटाणुका कारण पनि कपाल झर्छ। तपाईंको जस्तो समस्या हर्मनको गडबडीले हुनसक्छ। हर्मन गडबडी हुँदा जसरी केटा मानिसको तालु खुइलिन्छ, त्यसैगरी केटीको पनि अगाडिको पाटो वा बीचको भाग पूरै खाली हुन्छ। यस्तो समस्यालाई प्याटन ह्यार लस भनिन्छ। खासगरी केटामा जस्तै एन्ड्रोजेन भन्ने हर्मन बढेर केटाको जस्तै तालु खुइलिने सम्भावना हुन्छ।परिवारमा अरुलाई पनि यस्तो समस्या छ भने त्यो वंशाणुगत हुन सक्छ। चर्म रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ। पुरुषमा जस्तै हर्मनको कारणले हो भने निको हुन गाह्रो हुन्छ।मेरो अनुहार एकदमै चिल्लो छ। अनुहार र जीउमा पूरै डन्डिफोर आउँछ। कारण के होला?मनोज महर्जनकाठमाडौंमान्छेको बढ्दो उमेरसँगै डन्डिफोर प्रायः सबै मानिसमा आउँछ। चढ्दो जवानीसँगै हर्मन चलायमान र वृद्धि पनि हुन्छ। हर्मनको एक्टिभिटी बढ्दा मानिसमा शिवासिया ग्रन्थि पनि बढ्छ। यसले डन्डिफोर देखिन्छ। यो ग्रन्थीको कारण बढेको डन्डिफोर उमेर बढ्दै गएपछि कम हुन्छ। डन्डिफोरलाई युवा अवस्थाको संकेत भनिए पनि यसले कतिपयको अनुहारै कुरुप पार्न सक्छ। त्योबाहेक चिल्ला खानेकुरा, क्रिम, तेल र जेलहरु एवं जंकफुड प्रयोगले पनि डन्डिफोर बढ्छ। खासगरी कुन उमेर हो र कति डन्डिफोर छ भन्ने थाहा भएपछि विस्तारै अन्य जोखिमयुक्त बानी घटाउँदै लैजानुपर्छ। चिल्लो प्रयोग कम गर्ने, ८/९ घन्टा सुत्ने, नकोट्याउने, सागपात, फलफुल र पानी प्रसस्त खाने र तनावमुक्त रहने। निको पार्ने नाममा जथाभावी औषधी खाने र निचोर्ने भने गर्नुहुन्न। धेरै नराम्रो हुनेगरी आएमा औषधि सेवन गर्ने र विशेष मल्हम लगाउन सकिन्छ। यस्तो उपचार कम्तीमा तीन महिना गर्नुपर्छ। घरेलु तरीकाबाट पनि डन्डीफोरबाट बच्न सकिन्छ। सुत्नुअघि तातोपानीले मुख धुने र अनुहारमा तातो पानीको बाफ दिने गर्नुपर्छ।म ३२ वर्षे पुरूष हुँ। मेरो आँखा मुन्तिरको भागमा कालो पोतो आएको छ। के कारणले यस्तो भएको होला?प्रताप शर्माबिजुलीबजारअनुहारमा कालोपोतो आउनुको प्रमुख कारण घाम हो। घामबाट आउने परावैजनी रंगको विकिरणले कालोपोतो आउँछ। खासगरी १० देखि २ बजेसम्मको घाम छालाका लागि हानिकारक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञलाई देखाएर सही खालको सन ब्लक क्रिम लगाउने र घामबाट बच्ने अन्य उपाय अपनाउनु पर्छ। यस्तो समस्या हटाउन पनि सागपात, पानी र फलफूल बढी खानुपर्छ।मेरो छाला धेरै राम्रो थियो। ६ महिनाअघि मात्रै बच्चा पाएको हुँ। सुत्केरी नहुँदासम्म यस्तो समस्या थिएन्। अहिले विस्तारै अनुहारमा पोतो बढ्दै गएको छ। फेयर एन्ड लभ्ली क्रिम लगाउँछु, तर घटेको छैन। यसको उपचार के होला?ममता आचार्यसीतापाइला, काठमाडौमाथिकै प्रश्नमा भनेजस्तै पोतोको कारण मुख्यगरी घाम नै हो। त्यसबाहेक गर्भवति भएपनि महिलामा हुने हर्मन स्टेजोनमा बृद्धि हुँदा कालोपोतो बढ्छ। विस्तारै सुत्केरीपछि हर्मनको मात्रा पनि घट्दै गएर पोतो हराउनुपर्छ। तर गर्भवती र बच्चालाई पनि घाममा राखिने भएकाले महिलाको घामसँग सम्पर्क बढ्छ र कालोपोतो पनि बढ्छ। यस्तो समस्या विस्तारै कम हुँदै जान्छ। केही महिलामा लामो समयसम्म पनि रहन्छ। यस्तो अवस्थामा घामबाट गरिने बचावट बढाउने र जाँच गरेर त्यहीअनुसार क्रिम प्रयोग गर्ने।
स्वास्थ्य	महिलाकाे चरम सुख कस्तो हुन्छ ?यौन सम्पर्कका बेला महिलाले चरम सुखको अनुभव गर्न सक्दैनन् भन्ने सुनेको छु । पुरुषको जस्तो वीर्य...	उत्तेजनहीनता र शीघ्र स्खलन हुँदा-हरेक दशमध्ये एकजना पुरुषलाई शीघ्र स्खलनको समस्या हुन्छ।- पाँच सय जोडीमाझ अनुसन्धान गरेर साढे पाँच मिनेट...	स्तन क्यान्सरका सात लक्षणमहिलामा स्तन क्यान्सर हुने क्रम निरन्तर बढिरहेकाले यस्ता लक्षण देखा परेमा डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुपर्छः	सेक्सअघि यी पाँच कुरा कहिल्यै नगर्नुस्एलर्जीको औषधि नखानेसेक्सअघि औषधि खानाले यौनरस कम निस्किन्छ, जसले सेक्सलाई पीडादायक बनाउँछ। एलर्जीको औषधि लिने गर्नुभएको...	भिन्डीका १७ फाइदा– भिन्डी अर्थात् रामतोरियाँमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ। यो राम्रोसँग पच्छ र यसले पाचन प्रक्रियालाई पनि...	भर्खरै...